Amagumbi ama-18 aPhezulu aPhuphu-iLavender, iLilac kunye neViolet yokuHombisa iiMbono - Ukuphefumlelwa Kombala
Amagumbi ama-18 aPhezulu aPhuphu-iLavender, iLilac kunye neViolet yokuHombisa iiMbono
Ngokunyanisekileyo kukaDenise McGaha
Ukuba uyiphosile, ngokucacileyo Lilac yeminyaka eliwaka intsha ipinki yemileniyam . Gasp! Unyaka omtsha, i-pastel entsha, akunjalo? Umthunzi uyavela kuyo yonke indawo, kodwa kukho indawo yonke yemibala emfusa ekudala ilindelwe ukwenza ikhaya lakho lisebenze. Nantsi indlela yokuyifaka-nokuba ufuna ukuya kwi-hardcore okanye nje ukubamba apha naphaya.
Jonga igalari 18Iifoto UAnnie Schlechter 1Kaninzi '18Isifundo seAmethyst
Zombini iindonga kunye nophahla kolu phando lwasezantsi lubonisa ipeyinti ye-amethyst. Iipapa eziqaqambileyo ezimfusa esofeni kunye UChristopher isibane siyinike umahluko omncinci, ke ayisiva ngathi ithule kakhulu.
Ngokunyanisekileyo kweCollins Interiors MbiniKaninzi '18Lilac Ikhitshi
Sebenzisa izitulo zebar ukongeza umbala wombala kwikhitshi emhlophe yonke. Ngoku izakuvakala ngathi yintwasahlobo, nokuba imozulu imbi kangakanani ngaphandle.
Bona ngakumbi kwi IiCollins zangaphakathi .
UBrittany Ambridge 3Kaninzi '18Iphephadonga likaLilac
Le bhodi yentloko ebomvu ijikeleze iwindows setyhula, inceda ukophula umbala kunye nokongeza ukukhanya kwigumbi. Iphephadonga leentyatyambo longeza ukufihla okucacileyo kweli gumbi lokulala.
UJulien capmeil 4Kaninzi '18Igumbi lokutyela iMauve
I-Mauve ayingwevu kakhulu, ayinayo i-violet kakhulu. Yongeza umahluko kumbala we-grey e-serene ngokugcina isitulo ngasemva nge-burlap.
UBeatriz da Costa 5Kaninzi '18Ukungena kweLavender
Iindonga ze-lavender ezizalisiweyo ziyabulisa kwiindwendwe kweli khaya laseMassachusetts. Ibhentshi ehambelana nayo ibopha yonke into kunye.
zenzele ukutya ukutya kweentaka
UFrancesco Lagnese 6Kaninzi '18Ikhitshi laseBurgundy
Abathandi beVino banokulixabisa eli khitshi libomvu. Ukubeka imibala ngombala omenyezelayo kuncede indawo encinci ukuba izive inkulu.
UMaura McEvoy 7Kaninzi '18ILavender
Izitulo ze-lavender kwigumbi lokutyela laseScarsdale, ekhaya laseNew York zongeza kwi-glam-but-not-OTT vibe yayo.
Ngoc Minh Ngo 8Kaninzi '18Ibhentshi emfusa
Phakathi kweendonga kunye nesidlo, le ndawo yase-East Village yokutyela i-nook yayidinga pop yenye into. Isitulo esibomvu esibomvu esikhanyayo songeza umahluko kunye nokuphakamisa ukuziva kwe-eclectic.
UBjörn Wallander 9Kaninzi '18Igumbi lokuhlala likaLilac
Ipeyinti kaMisty Lilac ibalaselisa imizobo yookhokho baseTshayina benkulungwane ye-19. Ikat egqithileyo igubungela isofa kaManhattan.
UChristopher Baker 10Kaninzi '18ILayibrari yaseRoyal
Ukusuka kwisilingi yesilivere ukuya ezantsi kwizitulo zokushicilela izingwenkala, indlu yaseHamptons ihlala kwindawo yayo entle. Ipeyinti emfusa yambesa iindonga kwi-gloss ephezulu, kwaye isofa igqunywe nge-velvet.
UErica George Dines Shumi elinanyeKaninzi '18Amashalofu eFuchsia
Ukuba oku kugaya okuqaqambileyo kwegumbi kwakungonelanga, ikwayileyile i-magenta grosgrain ngesikhumba kunye nezitudiyo zokunciphisa ixabiso lendabuko.
UBeatriz da Costa 12Kaninzi '18Iphepha lodonga elibhalwe ngesandla
Iphepha lodonga olubucayi laseTshayina yinkwenkwezi yeli khaya laseMassachusetts. Ithelekiswa netafile enesibindi kunye nezitulo zangoku.
UJonny ukhaliphile 13Kaninzi '18Imbaleki yePeriwinkle
Ukuphelelwa ziindawo zokubeka umbala owuthandayo? Ungazilibali izinyuko.
UChristopher Sturman 14Kaninzi '18Igumbi lokutyela iwayini
Iindonga zewayini ziyacenga, zifudumele, kwaye zinempilo. Ngaphezulu kweebhatyi ezisixhenxe ze-lacquer zenza esi sipili-njenge-sheen.
UMaura McEvoy Shumi elinantlanuKaninzi '18Isakhelo esimfusa
Isibuko saseRomano sithatha umbala omfusa kwigumbi laseManhattan. Esi sithuba sibhukishelwe ngombala we-faux-zebra kunye nokukhanya kwesitatimende.
UPatrick Cline 16Kaninzi '18Iindonga zaseburhulumenteni
Sebenzisa umbala ofanayo kwigumbi lonke. Ngale ndlela, iliso lakho alitsiba ukusuka kwiindonga ezimnyama ukuya kwitreyini ekhanyayo, kwaye liziva liphumle ngakumbi.
indlela yokubuyisela kwisityalo
UDavid oliver 17Kaninzi '18IOfisi yeMauve
UMauve ujongeka etsha xa exutywe namaqhekeza anamhlanje. Yindlela echuliweyo yokufaka umbala omfusa kwisithuba sakho.
Ngokunyanisekileyo kukaDenise McGaha 18Kaninzi '18Iringi yophahla
Ukuba uyawuthanda umbala, hamba nayo. Olu luhlu lwekhitshi Ntlanu imibala emfusa.
OkulandelayoIikhitshi ezi-10 eziMthubi eziza kukonwabisa Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiUSienna Livermore Umhleli woRhwebo USienna Livermore ngumhleli wezorhwebo kwi-Hearst egubungela iimveliso ezithengisa kakhulu, izinto zasekhaya, ifashoni, ubuhle, kunye nezinto ongenakuphila ngaphandle kwazo.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
imibala eluhlaza yegumbi lokuhlala
itaylor ekhawulezayo irhode isiqithi ekhaya
iibhedi zesilayidi sabantwana abasabhadazayo